तपाईंको खुट्टा गन्हाउने समस्या छ ? यसबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यस्ता ७ उपाय न्युज एजेन्सी - Birgunj Sanjalतपाईंको खुट्टा गन्हाउने समस्या छ ? यसबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यस्ता ७ उपाय न्युज एजेन्सी - Birgunj Sanjalतपाईंको खुट्टा गन्हाउने समस्या छ ? यसबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यस्ता ७ उपाय न्युज एजेन्सी - Birgunj Sanjal
तपाईंको खुट्टा गन्हाउने समस्या छ ? यसबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यस्ता ७ उपाय न्युज एजेन्सी
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०३:०२
वीरगञ्ज । खुट्टा गन्हाउने समस्या विदेशतिर ‘खेलाडीको समस्याको रुपमा मा लिइन्छ । तर, यो समस्या खेलाडीको मात्रै हैन । पानी तथा हिलोमा काम गर्ने व्यक्तिमा खुट्टा गन्हाउने समस्या बढी देखिए आम मानिसमा पनि यस्तो समस्या हुन्छ । गन्हाउने समस्या फङगसबाट हुन्छ ।
खुट्टा तातो भएर पसिना आउँदा फङगस उत्पन्न हुन्छ । जसका कारण गन्हाउन सुरु हुन्छ । यो समस्या भइसकेपछि ३–४ हप्तासम्म ध्यान दिनुपर्छ ।
यसका लक्षणहरू विशेष गरी खुट्टाको औंलाको कापमा र छालामा चिरा पर्ने, फोका निस्की पानी भरिएर फुट्ने र पोलिरहने पनि हुन्छ । यस्तो बेलामा केही उपाय अपनाएर समस्या केही कम गर्न सकिन्छ।
जुत्ता ओभानो र सुख्खा पारेर लाउने
यस्तो समस्या पर्ने व्यक्तिले कपडाको जुत्ता लगाउनु बेश हुन्छ । छालाको जुत्ता सकभर प्रयोग नगर्नुहोस् । विशेषगरी गर्मीयाममा त जुत्ताभन्दा चप्पल÷स्लीपर जुत्ता लगाए नै वेश हुन्छ। जुत्तालाई सकेसम्म सुख्खा राख्नुपर्छ ।
जुत्ता सुकाउन जुत्तालाई भित्रपट्टि सफा कपडा वा कागजले हावा खेल्ने ठाउँमा खोलेर राख्नु बेश हुन्छ । तुना बाँध्ने जुत्ता छ भने तुना खोलेर सकेसम्म हावा खेल्ने ठाउँमा राखिदिनुपर्छ । सम्भव भएमा जुत्ता बेला बेलामा घाममा सुकाउनाले पनि राम्रो हुन्छ।
मोजा गन्हाउने र हिलो उछ्रने जस्ता समस्या हुने व्यक्तिले सकेसम्म सूतीकै मोजा प्रयोग गर्नुपर्छ । सूतीकै मोजा पनि सकेसम्म हरेक दिन फेर्नुपर्छ । यस्तो समस्या हुनेले मोजा धुँदा सफा गरेर साबुन लगाएर घाममा सुकाउनु पर्छ, ताकि त्यसमा फङगसका कुनै चिन्ह नरहुन् । साथै पसिनाको गन्ध पनि जाओस् र खुट्टा नगन्हाओस्।